Fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety | Martech Zone
Fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety
Alatsinainy Janoary 29, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ity herinandro ity dia nahaliana ny amin'ny Internet. Mpino mafy ny kapitalisma sy ny fahalalahana aho. Izy ireo dia lafiny roa amin'ny ambaratonga mitandrina. Raha tsy misy fahalalahana dia hitondra ny manan-katao. Raha tsy misy kapitalisma dia tsy hanana tombontsoa ho an'ny harena velively ianao.
Ny fanitsiana voalohany ny lalàm-panorenana: ny kongresy dia tsy tokony hamoaka lalàna momba ny fametrahana fivavahana, na mandrara ny fampiasana azy malalaka; na famintinana ny fahalalahana miteny, na an'ny gazety; na ny zon'ny vahoaka hivory am-pilaminana, ary hangataka amin'ny governemanta mba hanonerana ny fitarainana.
Zava-dehibe ny mahatadidy fa rehefa nosoratana ny lalàm-panorenana, ny "Press" dia vondron'olom-bolo izay nanana milina fanaovan-gazety. Tsy izy ireo orinasa goavambe notarihan'ny dolara fanaovana dokambarotra mahery vaika tahaka ny ankehitriny. Ilay "Gazety" matetika dia takelaka tsy dia misy dikany, izay manala baraka ny governemanta. Ny gazety tranainy indrindra, ny Hartford Courant, dia notorian'i Thomas Jefferson ho tompon'andraikitra aza… ary resy izy.
Fantatra ve? Tokony ho. Mitovy amin'ny fananana, hoy, tranokala na bilaogy izany. Ity no "Press" manaraka ary lahatsoratra bilaogy tsotra dia toa sahala amin'ny nataon'ny gazetinay tamin'ny taona voalohany tao amin'ny firenentsika lehibe. Fikambanana toa ny Electronic Frontier Foundation alao antoka fa voaro hatrany ireo fahalalahana ireo. Topazo maso ny tranokala EFF dia hahita ohatra am-polony maro amin'ny orinasa lehibe manandrana maka ilay tovolahy kely ianao.
Rehefa afaka ny vola dia miova ny tantara, sa tsy izany? Ireo mpanao gazety NBC dia mahita fiaramanidina mitsambikimbikina miaraka amin'ireo mpanao dokambarotra, fifanolanana misy eo amin'ny tombontsoa. Manadino ny andron'ny tsy misy mankasitraka ny kantony ireo mpitendry ary averin'izy ireo ny RIAA hiady hanohy hitahiry vola an-tapitrisany mba hahafahan'ny Cristal mitazona hatrany ary ny bling manaraka dia vidiana. Ary ireo tranonkala sy orinasan-tserasera manao an-tapitrisany maro dia manadino fa natomboka tamin'ny tsindry tokana izy ireo, fiovam-po tokana.
Nahavariana ity herinandro ity. Nijery aho rehefa nijoro i Robert Scoble, indraindray somary natanjaka kely, mba hahazoana antoka fa voaloa ny trosa amin'ny Internet. Robert aza nandinika ny tenany ary niaiky fa nanao hobnobbing kely kokoa ary nanadino ny toerana nanombohany. Mahafinaritra ny mahita an'io.
Nijery ihany koa aho rehefa niditra an-tsokosoko i GoDaddy ary nanapaka ny iray tamin'ireo mpanjifany tamin'ny hetahetan'ny orinasa lehibe iray. Tsy isalasalana fa hanana i GoDaddy na oviana na oviana nanao izany tamin'ny mpanjifa lehibe. Nandinika ny loza mety hitranga anefa izy ireo ary nieritreritra fa namono moka fotsiny teny amin'ny sandriny. Ny olana dia ny fisintomana ilay moka diso. Ankehitriny dia manana NoDaddy hiatrika izy ireo. (Fampahafantarana feno: Nanao ny sary famantarana tamin'ny tranokala NoDaddy aho androany hariva.)
Google izao Niaiky fa nanao fahadisoana izy ireo tamin'ny fanokafana orinasa tany Shina tamin'ny alàlan'ny kinova iray an'ny Search Engine. Mahatalanjona. Faly aho fa azon'izy ireo ny familiana ny tanan'ny fotoana amin'ireo olona ampahorina mahazo fahalalahana.
Misaotra soa noho ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety! Ary misaotra soa noho ny fahalalahan'ny Internet!
Mendrika ve ny fiantsonana domaine?
Handeha amin'ny Da Supa Bowl isika!